eNasha : Articles Related to उदारता in Weird & Interesting
Articles Related to उदारता in Weird & Interesting
दुबईका एक अधिकारीले ६३ वर्षीय पाकिस्तानी बगैँचेलाई ५० हजार दिराम पुरस्कार दिएका छन् । ...
आफू मरेर मान्छे जोगाउने कुकुर
बच्चाहरुलाई बचाउँदा उसले ती दुइ कुकुरबाट ठूलो आक्रमण झेल्नु पर्‍यो । यो आक्रमणपछि पहिलेदेखि नै मुटुको रोगी रहेको ज्याक गम्भीर घाइते भएको थियो ।...
उद्धार गरिएको बिरालो खतरनाक !
उनीहरुले चाहिँ घरपालुवा बिरालो बीच बाटोमा घाइते भयो भनेर माया गरेर उपचार गर्न ल्याएका थिए । डाक्टरले खतरनाक जनावर भनेपछि चाहिँ तिनको सातोपुत्लो नै गएछ !...
पत्रमित्र खोज्ने नयाँ जुक्ति !
बेलुन उड्दै आफ्नै देशकी रानीको हातमा पुग्यो र ती रानीले बालक टमको पत्रमित्र हुने इच्छा व्यक्त गरेकी छिन् ।...
प्रेममा धोका पाएकालाई बैंकको सान्त्वना
प्रेमिकाले धोका दिएका सेनाहरुलाई विशेष किसिमको राहत प्याकेज घोषणा कोरियाली बैंकले गरेको छ ।...
पाइखानामा पैसा !
यस्ता पैसा जापानी पारम्परिक वासी कागजको खाममा राखिएको पाइएको छ । "कृपया यो पैसाले तिम्रो आफ्नो जीवनस्तरलाई उन्नत बनाऊ" र "प्रति खाम एक जना मात्र" लेखिएको पाइएको छ । ...
तोडफोडमा छुट दिने रेष्टुराँ
तोडफोडमा रुचि राख्नु हुन्छ ? उसो भए चीनको एउटा रेष्टुराँमा खाना खाइसकेपछि तोडफोड गर्ने सुविधा उपभोग गर्नुहोस् ।...
कुकुरलाई मात्र सबैभन्दा बढी इमान्दार जनावरको पगरी गुथाउने ? स्कटल्याण्डको एउटा घोडालाई देख्दा यस्तो लाग्छ, अब घोडाहरुले यो 'टाइटल' हत्याउलान् !...
२ करोड डलर टिप्स !
मेरो पैसा, मेरो मर्जी भन्नेहरुको यो संसारमा कुनै कमी छैन । आफू गइरहने एउटा रेष्टुराँका चिनियाँ सञ्चालकहरुलाई बेलायतकी एक धनी महिलाले मर्ने बेलामा तिनलाई पनि केही टिप्स छोडेर गएकी छिन् र त्यो रकम २ करोड ३ डलर भएकाले लिनेलाई पनि टेन्सन र दिनेलाई पनि टेन्सन भइरहेको छ ।...
र्स्वर्ड्स्को मृत्यु जुलाईमा भएको भए पनि न त मेलिनालाई यसको खबर थियो न त घरका अन्य सदस्यहरुलाई । तर मेलिनालाई नयाँ वर्ष २००८ को शुभकामनास्वरुप ती बूढाले सात वर्षे लामो सेवाको 'टिप्स' छोडिदिएको उल्लेख गरेका छन् ।...
६५ वर्षपछि केरा फिर्ता
एउटा राम्रो कामको परिणाम पनि राम्रै हुन्छ । अथवा यसो भनुँ, राम्रो कामको अन्त्य पनि राम्ररी नै गरिनु पर्छ । चाहे त्यसको लागि ६५ वर्ष नै कुर्नु किन नपरोस् ।...
७६ वर्षेहरुलाई ग्याँस सित्तैमा
अमेरिकाको फिलाडेल्फियामा ७६ वर्षका वृद्ध वृद्धाहरुलाई अहिले खुशीको खबर छ । उनीहरुले आफ्नो उमेर ७६ वर्ष पुगेको प्रमाणित गर्न सके तिनीहरुलाई एक दिनका लागि ग्याँस सित्तैमा दिइने खबरहरुमा बताइएको छ ।...
Data 1 - 15 of 26 [Total2Pages]